14 ရကျအတှငျး ဗိုကျခပျြသှားစမေယျ့ အုနျးရညျရဲ့အကြိုးကြေးဇူးမြား
HomeKnowledge14 ရကျအတှငျး ဗိုကျခပျြသှားစမေယျ့ အုနျးရညျရဲ့အကြိုးကြေးဇူးမြား
ကိုယျအလေးခြိနျကဖြို့အတှကျ အပွငျးအထနျ ကွိုးစားနရေတယျ ဆိုရငျ သငျဘယျတော့မှ မစဉျးစားမိတဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျကို မထငျထားလောကျအောငျ ကသြှားစမေယျ့ အရာတဈခုရှိပါတယျ။ အဲဒီအရာက ကိုယျအလေးခြိနျကစြရေုံမက ကနျြးမာရေးအတှကျ အကြိုးကြေးဇူးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ထိပျတနျးမျောဒယျတှေ၊ နာမညျကြျော အားကစားသမားတှေ၊ ကမ်ဘာ့အသိအမှတျပွု အဖှဲ့အစညျးတှကေတောငျ အုနျးရညျကို ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျတဲ့ သောကျစရာအဖွဈ မှတျခကျြပေးထားပါတယျ။
8. ကိုယျအလေးခြိနျကို မွနျမွနျဆနျဆနျ လှယျလှယျကူကူ ကစြပေါတယျ။
ကိုယျအလေးခြိနျ ကဖြို့အတှကျ ကွိုးစားနတေယျဆိုရငျ အုနျးရညျကို သောကျသငျ့ပါတယျ။အုနျးရညျမှာ ကယျလိုရီနညျးပါးပွီး သောကျပွီးရငျ ဗိုကျပွညျ့နတေယျလို့ အခြိနျအတနျကွာ ခံစားရစမှောပါ။ ထမငျးမစားခငျမှာ အုနျးရညျတဈခှကျလောကျ သောကျကွညျ့ရငျ ထမငျးနညျးနညျးပဲ စားဖွဈတော့မှာပါ။
7. ခန်ဓါကိုယျကို ရဓေါတျပွညျ့စပေါတယျ။
အုနျးရညျက စှမျးအငျတှကေို ပွနျလညျသိုလှောငျပေးပွီး ခန်ဓါကိုယျထဲက ရဓေါတျတှကေို မြှတအောငျ ထိနျးသိမျးပေးပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အားကစားသမားတှကေို အုနျးရညျသောကျဖို့ တိုကျတှနျးရခွငျးဖွဈပါတယျ။ အားကစားမလုပျခငျ၊ အားကစားလုပျနစေဉျ၊ အားကစားလုပျပွီးအခြိနျတှမှော အုနျးရညျသောကျလို့ ရပါတယျ။
6. အစာခမြှေုနဲ့ပတျသကျပွီး အုနျးရညျက ပွဿနာမရှိစပေါဘူး။
အုနျးရညျထဲမှာ အမြှငျဓါတျတှကေ ပြျောဝငျနတောကွောငျ့ အစာမကွခွေငျးကို သကျသာစပေါတယျ။ ဝမျးလြှောတဲ့ ကလေးတှကေို အုနျးရညျတိုကျဖို့ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ကွီးကတောငျ အကွံပေးထားပါတယျ။
5. သှေးပေါငျခြိနျကိုလညျး ပုံမှနျဖွဈစပေါတယျ။
အုနျးရညျက သှေးပေါငျခြိနျအတှကျ အကြိုးမြားစှာ ပွုပါတယျ။ သှေးတိုးသှေးကြ မမှနျတဲ့အခြိနျတှမှော အုနျးရညျသောကျပေးရငျ သှေးပေါငျခြိနျကို သူ့အလိုအလြောကျ ထိနျးညှိပေးသှားမှာပါ။
4. အသားအရကေို တောကျပစပေါတယျ။
အုနျးရညျမှာ အငျတီအောကျဆီးဒငျ့တှေ ပါဝငျတာကွောငျ့ အဆိပျအတောကျတှကေို ဖယျထုတျပေးပါတယျ။ ခန်ဓါကိုယျအတှကျ လိုအပျတဲ့အာဟာရဓါတျတှကေိုလညျး ပွညျ့စပေါတယျ။ဒါ့အပွငျ မကျြနှာက အမညျးစကျတှေ၊ ဝကျခွံတှကေိုလညျး ပြောကျသှားစမှောပါ။
3. အုနျးရညျက စိတျဖိစီးမှုတှကေိုလညျး နညျးသှားစပေါတယျ။
အုနျးရညျမှာပါဝငျတဲ့ ဗီတာမငျ B က စိတျဖိစီးမှုတှကေို လြော့စပွေီး စိတျအလိုမကတြာတှကေိုလညျး လြှော့ခပြေးပါတယျ။ ခန်ဓါကိုယျထဲမှာ မဂ်ဂနီဆီယမျမြားတဲ့အခါ စိတျဖိစီးမှု ပိုတိုးလာစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ စိတျဖိစီးမှုတှေ မြားလာပွီဆိုရငျ အုနျးရညျသာ မြားမြားသောကျလိုကျပါ။
2. အုနျးရညျက အရကျနာကခြွငျးအတှကျ သဘာဝဆေးပါပဲ
ညဘကျမှာ အရကျသောကျတာ မြားသှားရငျ အုနျးရညျသောကျဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။ အုနျးရညျထဲမှာ အာဟာရဓါတျတှေ ကွှယျဝတာကွောငျ့ ခန်ဓါကိုယျကို ရဓေါတျပွနျဖွညျ့ပေးပါတယျ။ အုနျးရညျမှာ ရသေနျ့ 95% ပါဝငျပါတယျ။အဲဒါကွောငျ့ ရဓေါတျညီမြှဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံးသောကျစရာပါပဲ
1. အုနျးရညျက မကျြနှာပျေါ အရေးအကွောငျး ဖွဈလာစမှေုကို နှေးသှားစပေါတယျ။
အုနျးရညျမှာ cytokinins ဆိုတဲ့ အပငျဟျောမုနျးပါဝငျပွီး အဲဒီဟျောမုနျးက ကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးကြိုးပွုပါတယျ။ ဆဲလျပွိုကှဲမှုအတှကျသာမက အသကျအရှယျ အိုမငျးလာမှုကွောငျ့ဖွဈတဲ့ အရေးအကွောငျးတှကေိုလညျး လြှော့ခပြေးပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကငျဆာနဲ့ သှေးကွောပိတျခွငျး၊ သှေးခဲဆို့ခွငျးတှေ မဖွဈအောငျလညျး ကာကှယျပေးပါတယျ။
14 ရက်အတွင်း ဗိုက်ချပ်သွားစေမယ့် အုန်းရည်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အတွက် အပြင်းအထန် ကြိုးစားနေရတယ် ဆိုရင် သင်ဘယ်တော့မှ မစဉ်းစားမိတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို မထင်ထားလောက်အောင် ကျသွားစေမယ့် အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီအရာက ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေရုံမက ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ထိပ်တန်းမော်ဒယ်တွေ၊ နာမည်ကျော် အားကစားသမားတွေ၊ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင် အုန်းရည်ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ သောက်စရာအဖြစ် မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။
8. ကိုယ်အလေးချိန်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် လွယ်လွယ်ကူကူ ကျစေပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန် ကျဖို့အတွက် ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင် အုန်းရည်ကို သောက်သင့်ပါတယ်။အုန်းရည်မှာ ကယ်လိုရီနည်းပါးပြီး သောက်ပြီးရင် ဗိုက်ပြည့်နေတယ်လို့ အချိန်အတန်ကြာ ခံစားရစေမှာပါ။ ထမင်းမစားခင်မှာ အုန်းရည်တစ်ခွက်လောက် သောက်ကြည့်ရင် ထမင်းနည်းနည်းပဲ စားဖြစ်တော့မှာပါ။
7. ခန္ဓါကိုယ်ကို ရေဓါတ်ပြည့်စေပါတယ်။
အုန်းရည်က စွမ်းအင်တွေကို ပြန်လည်သိုလှောင်ပေးပြီး ခန္ဓါကိုယ်ထဲက ရေဓါတ်တွေကို မျှတအောင် ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အားကစားသမားတွေကို အုန်းရည်သောက်ဖို့ တိုက်တွန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အားကစားမလုပ်ခင်၊ အားကစားလုပ်နေစဉ်၊ အားကစားလုပ်ပြီးအချိန်တွေမှာ အုန်းရည်သောက်လို့ ရပါတယ်။
6. အစာချေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အုန်းရည်က ပြဿနာမရှိစေပါဘူး။
အုန်းရည်ထဲမှာ အမျှင်ဓါတ်တွေက ပျော်ဝင်နေတာကြောင့် အစာမကြေခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ ဝမ်းလျှောတဲ့ ကလေးတွေကို အုန်းရည်တိုက်ဖို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတောင် အကြံပေးထားပါတယ်။
5. သွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်း ပုံမှန်ဖြစ်စေပါတယ်။
အုန်းရည်က သွေးပေါင်ချိန်အတွက် အကျိုးများစွာ ပြုပါတယ်။ သွေးတိုးသွေးကျ မမှန်တဲ့အချိန်တွေမှာ အုန်းရည်သောက်ပေးရင် သွေးပေါင်ချိန်ကို သူ့အလိုအလျောက် ထိန်းညှိပေးသွားမှာပါ။
4. အသားအရေကို တောက်ပစေပါတယ်။
အုန်းရည်မှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပေးပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓါတ်တွေကိုလည်း ပြည့်စေပါတယ်။ဒါ့အပြင် မျက်နှာက အမည်းစက်တွေ၊ ဝက်ခြံတွေကိုလည်း ပျောက်သွားစေမှာပါ။
3. အုန်းရည်က စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်း နည်းသွားစေပါတယ်။
အုန်းရည်မှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် B က စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့စေပြီး စိတ်အလိုမကျတာတွေကိုလည်း လျှော့ချပေးပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်ထဲမှာ မဂ္ဂနီဆီယမ်များတဲ့အခါ စိတ်ဖိစီးမှု ပိုတိုးလာစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များလာပြီဆိုရင် အုန်းရည်သာ များများသောက်လိုက်ပါ။
2. အုန်းရည်က အရက်နာကျခြင်းအတွက် သဘာဝဆေးပါပဲ
ညဘက်မှာ အရက်သောက်တာ များသွားရင် အုန်းရည်သောက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ အုန်းရည်ထဲမှာ အာဟာရဓါတ်တွေ ကြွယ်ဝတာကြောင့် ခန္ဓါကိုယ်ကို ရေဓါတ်ပြန်ဖြည့်ပေးပါတယ်။ အုန်းရည်မှာ ရေသန့် 95% ပါဝင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် ရေဓါတ်ညီမျှဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးသောက်စရာပါပဲ
1. အုန်းရည်က မျက်နှာပေါ် အရေးအကြောင်း ဖြစ်လာစေမှုကို နှေးသွားစေပါတယ်။
အုန်းရည်မှာ cytokinins ဆိုတဲ့ အပင်ဟော်မုန်းပါဝင်ပြီး အဲဒီဟော်မုန်းက ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးပြုပါတယ်။ ဆဲလ်ပြိုကွဲမှုအတွက်သာမက အသက်အရွယ် အိုမင်းလာမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အရေးအကြောင်းတွေကိုလည်း လျှော့ချပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကင်ဆာနဲ့ သွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ သွေးခဲဆို့ခြင်းတွေ မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။